सुखी जीवनकाे सूत्रः पति पत्नीकाे बीचमा प्रेम कति आवश्यक? - DURBAR TIMES
HomeLife Styleसुखी जीवनकाे सूत्रः पति पत्नीकाे बीचमा प्रेम कति आवश्यक?
सुखी जीवनकाे सूत्रः पति पत्नीकाे बीचमा प्रेम कति आवश्यक?
प्रेम जीवनकाे अभिन्न अंग हाे । अहिलेकाे समयमा प्रेमसम्बन्धि विभिन्न धारणाहरू बाहिर आइरहेका छन् । प्रेम सम्बन्धकै कारण कतिले आफ्नाे जीवन नै दाउमा राख्ने गरेकाे पाइन्छ।के प्रेम सम्बन्ध नै जीवनकाे अन्तिम विकल्प हाे ? प्रेम बिना सम्बन्ध स्थापित गर्न सकिन्न ?
प्रेमले वैवाहिक सम्बन्धमा कस्ताे प्रभाव पारेकाे हुन्छ भनेर हामीले महाभारतकालीन कथाकाे सानाे प्रसंगलाइ आधार बनाएर केही जानकारी दिने प्रयास गरेका छाैँ ।
राजा हरिश्चन्द्र र तारामतिकाे कथा
महाभारतकालीन राजा हरिश्चन्द्र सत्य वचनका लागि प्रसिद्द थिए । उनकाे विवाह तारामतिसँग भएकाे थियाे । हरिश्चन्द्र सँधै सत्य बाेल्दथे । हरिश्चन्द्रकाे वैवाहिक जीवनमा पाँच तत्व प्रेम,, त्याग सपर्पण ,सन्तुष्टि र सँस्कार सबैकुराले काम गरिरहेका थिए । हरिश्चन्द्र र तारामतिकाे पहिलाे आधार भने प्रेम थियाे । हरिश्चन्द्र तारामतिलाई यति प्रेम गर्दथे कि उनले आफ्ना तत्कालीन समकक्षी राजाहरूकाे जस्ताे दाेश्राे विवाहकाे बारेमा कहिले पनि साेचेनन् । उनी पत्नीव्रत धर्ममा कटिबद्द भएर लागेका थिए।
तारामतिकाे लागि पनि पति नै सबथाेक थिए ,। पतिले भनेकाे भरमा तारामतिले सबै सुख र राजमहल छाेडेर एक दासीकाे रूपमा आफ्नाे जीवन व्यतित गर्ने प्रण गरेकी थिइन् ।उनकाे याे निर्णय पतिप्रतिकाे समर्पण र त्यागकाे भावना थियाे । दुवैजनाले कहिले पनि एक अर्कालाइ कुनैपनि कुराकाे लागि गुनासाे गरेनन् ।
हरिश्चन्द्र र तारामति दुवैजना जीवनमा जे मिल्याे त्यसैमा सन्तुष्ट भए। दुवैजनाले यहि सँस्कार आफ्नाे छाेरालाई पनि दिए । राजकाज गुमेकाे बेलापनि उनीहरू आफ्नाे धर्म निभाइरहे । राजा हरिश्चन्द्रले आफ्नाे व्यवहार र सत्य व्रतले गर्दा नै आफ्नाे राजकाज प्राप्त गरेका थिए ।
हरिश्चन्द्र र तारामतिकाे जीवनबाट हामीले लिने प्रेरणा भनेकाे पति र पत्नी लाइ एक अर्काकाे दुःख सुखमा हमेशा साथ दिनुपर्छ । जस्ताेसुकै अवस्थामा पनि आड भराेसा कायम रहिरहनु पर्दछ । आफ्नाे निर्णयमा अडिग रहन सकियाे भने जस्ताेसुकै परिस्थितिकाे पनि सामना गर्न सकिन्छ । जहाँ तालमेल बिग्रिन्छ त्यहाँ स्वार्थकाे प्रवेस हुन्छ र त्यहाँ सम्बन्ध बिग्रन सुरू गर्छ ।
यही कारणलेे गर्दा वैवाहिक सम्बन्धमा प्रेम , त्याग , समर्पण , सन्तुष्टि र सँस्कार बनाइरहनुपर्छ ।
Previous articleकाम देउ, गरेर खान्छौँः असङ्गठित मजदुर
Next articleबेँसीशहर–चामे सडकलाई ‘राष्ट्रकवि मार्ग’ नामकरण गर्न माग